Vovoka OEA tsara indrindra (111-58-0) Mpanamboatra sy ozinina
Oleoylethanolamide (OEA) vovoka (111-58-0)
Cofttek no mpamokatra vovoka Oleoylethanolamide (OEA) tsara indrindra any Shina. Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana famokarana tanteraka (ISO9001 & ISO14001), miaraka amin'ny fahafaha-mamokatra isam-bolana 2000kg.
Horonantsary OEA (111-58-0) horonantsary
Vovoka OEA Specifications
Formula Molecular: C20H39NO2
Molekular lanja: 325.53 g / mol
Anarana simika: N-Oleoylethanolamide
fampiharana: Oleoylethanolamide (OEA) dia metabolita voajanahary izay atao amina bitika kely amin'ny tsinainao kely. Ny OEA dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny hanoanana, lanja, ny tavy amin'ny vatana ary ny kolesterola amin'ny alàlan'ny mamatotra ny mpandray azy iray fantatra amin'ny anarana hoe PPAR-Alpha (Peroxisome proliferator-activated alpha receptor alpha).
Inona ny Oleoylethanolamide (OEA) CAS 111-58-0?
Oleoylethanolamine (OEA) dia fitrandrahana etanolamide voajanahary ary ekipa vita ho siantifika faxisome proliferator-activated receptor-α (PPAR-α). Vokarina ao anaty tsinay kely ary manakana ny fihinan-kanina amin ny fampiroboroboana ny PPAR-α. OEA koa dia manetsika ny GPR119, molotra bioactive miaraka amin'ny fiantraikany hypophagic sy anti-obesity.
Oleoylethanolamide (OEA) CAS 111-58-0 tombony
Oleoylethanolamide (OEA) dia metabolita voajanahary izay atao amina bitika kely amin'ny tsinainao kely. Ny OEA dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny hanoanana, lanja, ny tavy amin'ny vatana ary ny kolesterola amin'ny alàlan'ny mamatotra ny mpandray azy iray fantatra amin'ny anarana hoe PPAR-Alpha (Peroxisome proliferator-activated alpha receptor alpha). Raha ny tena izy, ny OEA dia mampiakatra ny metabolismin'ny tavy amin'ny vatana ary milaza amin'ny atidohanao hoe feno ianao ary fotoana tsy hampiarahana intsony ny sakafo. Ny OEA koa dia fantatra fa mampitombo ny fandaniana kaloria mifandraika amin'ny fampiasana tsy misy fanatanjahan-tena.
Oleoylethanolamide (OEA) CAS 111-58-0 Matihanina amin'ny asa?
Oleoylethanolamide (OEA) dia foronina sy ampiorenana ao amin'ny tsinay kely akaiky indrindra avy amin'ny asidra oliva azo avy amin'ny sakafo, toy ny menaka oliva. Ny fihinanana sakafo matavy be dia afaka manakana ny famokarana OEA ao amin'ny tsinay. Ny OEA dia mampihena ny fihinanana sakafo amin'ny alàlan'ny fampidirana oxytocine homéostatika sy ny lalan'ny ati-doha histamine ary koa ny lalan'ny dopamine hedonic. Misy porofo manamarina fa ny OEA dia mety hampihena ny mari-pana hedonic cannabinoid receptor 1 (CB1R), ny fampandehanana azy dia mifandray amin'ny fitomboan'ny fihinanana sakafo. Ny OEA dia mampihena ny fitateran'ny lipida mankany amin'ny adipocytes hampihena ny tavy matavy. Ny famaritana bebe kokoa ny vokatry ny OEA amin'ny fihinanana sakafo sy ny metabolisma lipid dia hanampy amin'ny famaritana ireo rafitra ara-batana izay azo kendrena hampivelatra ireo fitsaboana mahomby kokoa amin'ny hatavezina.
Oleoylethanolamide (OEA) dia agonistan'ny receptor-α (PPAR-α). N-Oleoylethanolamide dia mamorona famantarana tsinay izay mandrisika ny hetsika dopamine afovoany izay mampisy fifandraisana eo amin'ny kalorika-homeostatic sy hedonic-mpanara-maso homeostatic. Ny Oleoylethanolamide dia voarohirohy ho rafitra molekiola mifandraika amin'ny fahombiazan'ny gastric bypass. N-Oleoylethanolamide dia agonista GPR55 voafantina.
Oleoylethanolamide (OEA) CAS 111-58-0 fampiharana
Oleoylethanolamide (OEA) dia miasa mba hampavitrika zavatra antsoina hoe PPAR ary mampiakatra ny fandoroana tavy ary hampihena ny fitehirizana tavy. Rehefa misakafo ianao dia mihombo ny haavon'ny OEA ary mihena ny fahazotoan-komana anao rehefa milaza ny hozatra mahatsapa izay mifandray amin'ny atidohanao fa voky ianao. PPAR-α dia vondrona mpandray nokleary mihetsiketsika ligand izay voarohirohy amin'ny fomba fitenin'ny fototarazon'ny lipidia metabolism sy ny làlam-pamokarana energihomeostasis.
Vovoka OEA amidy(Aiza ​​no hividianana vovoka Oleoylethanolamide (OEA) betsaka)
Mpamatsy vovoka Oleoylethanolamide (OEA) matihanina izahay mandritra ny taona maro, manolotra vokatra miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana izahay, ary ny vokatray dia manana kalitao avo lenta indrindra ary mandalo fitsapana henjana sy mahaleo tena hahazoana antoka fa azo antoka ho an'ny fanjifana eran'izao tontolo izao.